Google Adsense maka Nnyocha: Nsonaazụ Na WordPress | Martech Zone
Google Adsense maka Nchọta: Embed Results na WordPress
Monday, September 4, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe m mere obere ihe ndebiri ọrụ na WordPress n'izu ụka a, ahụrụ m ihe edeturu banyere itinye Google Adsense Google gị maka nsonaazụ ọchụchọ n'ime ibe nsonaazụ ọchụchọ gị. Nke a mara ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ na-agbanwe agbanwe, mana na-arụ ọrụ n'ime WordPress ọ na-esikwu ike. Obi dị m ụtọ, Google rụrụ ọmarịcha ọrụ (dị ka ọ dị na mbụ) site na ịde ụfọdụ ezigbo ederede dị ọcha iji tinye nsonaazụ ahụ.
Naanị m deziri ndebiri "Peeji" m wee tinye koodu nke Google chọrọ maka ihu ọdịda. Enwere m nsonaazụ ọchụchọ m na biputere na peeji ọchụchọ m (https://martech.zone/search). Mgbe ahụ, emelitere m peeji ọchụchọ m na ụdị ọchụchọ (yana obere ederede ụfọdụ).
Ederede nke Google na-enye nwere ọgụgụ isi na-egosipụta naanị ma ọ bụrụ na enwere nsonaazụ post, yabụ ibe m anaghị egosipụta ihe ọ bụla. Echere m na m gaara ede 'ọ bụrụ na nkwupụta' nke gosipụtara naanị nsonaazụ ya ma ọ bụrụ na ibe ahụ hara ihu na peeji ọchụchọ ahụ. Agbanyeghị, echegbughị m ebe ọ bụ na ọ gaghị egosipụta ma ọ bụghị. Echere m na ọ bụ ntakịrị mbanye anataghị ikike na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị, mana ọnaghị emerụ ihe ọ bụla.
Nzọụkwụ m ọzọ bụ iji hụ na ọ nweghị ndị na-asọpụrụ onye were m n'ọrụ gosipụtara na nsonaazụ ọchụchọ ahụ! Enwere m olileanya na m nwetara ha niile!
Gbalịa ya Ebe a.
Tweaks: Moga na Wider Format
Akwụkwọ akụkọ kwesịrị iche echiche…